RASMI: Real Madrid Oo Ku Dhawaaqday In Ay Kooxda Olympique Lyon Ka Iibisay Gool Dhaliyihii Kooxdeeda Ee Mariano Diaz. – WWW.Gool24.net
RASMI: Real Madrid Oo Ku Dhawaaqday In Ay Kooxda Olympique Lyon Ka Iibisay Gool Dhaliyihii Kooxdeeda Ee Mariano Diaz.
Kooxda Real Madrid ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay gool dhaliyihii kooxdeeda ee Mariano Diaz ka iibisay kooxda horyaalka Faransiiska ee Olympique Lyon. Mariano Diaz oo ah gool dhaliye da’yar ah oo heer gool dhalin cajiib ah ku soo bandhigay kooxda Real Madrid B ee Casilla ayaa xili ciyaareedkii dhamaaday ka tirsanaa kooxda kowaad ee Zidane laakiin waxa uu waayay fursad uu ku ciyaaro.
Dhinaca kale kooxda Olympique Olympique Lyonnais ayaa ku dhawaaqday in ay dhamaystirtay saxiixa Mariano waxayna kula wareegtay 8 milyan oo euros. Real Madrid ayaa da’yarkan uga mahad celisay waqtigii fiicnaa ee uu kooxaheeda da’yarta ah ku soo qaatay iyo xiradlanimadii uu soo muujiyay.
Qoaraalka Real Madrid ka soo baxay ee heshiiska Mariano lagu shaaciyay ayaa lagu yidhi:” Kooxda kubbada cagta Real Madrid iyo Olympique Lyonnais waxay ka heshiisyeen la wareegista Mariano. Kooxdu waxay doonaysaa in ay uga mahad celiso xirfadlanimadiisii iyo hibayntii uu soo bandhigay ka ciyaartoy ahaan sanadiihii la soo dhaafay waxayna wanaag oo dhan uga rajaynaysaa waayihiisa cusub”.
Kooxda Olympique Lyonnais ayaa ku guulaysatay saxiixa Mariano Diaz oo loo yaqaanay mishiinka gool dhalinta Real Madrid B ee Casilla halkaas oo uu ku soo bandhigay qaab ciyaareed aad u fiican laakiin iyada oo kursiga kaydka Real madrid ay ku jireen Lucas Vazguez, Alvaro Morata, Marco Asensio iyo waliba James Rodriguez ayuuna Mariano helin waqti uu Zidane iskugu muujin karo.
Shalay ayay sidan oo kale Real Madrid kooxdeeda uga dirtay wiilka uu Zinedine Zidane dhalay ee Enzo Zidane kaas oo heshiis saddex xili ciyaareed ah ugu biiray kooxda Alaves. Mariano ayaa kooxda Lyon u saxiixay heshiis waqti dheer ah oo dhacaya 2022.
Markii uu Mario ku biiray kooxda Olympique Lyonnais ayuu dareenkiisa ka hadlay wuxuuna yidhi: “Anigu aad ayaan ugu faraxsanahay in aan halkan joogo, waa wax fiican in aan soo gaadhay kooxda wayn. Mid ka mid ah sababahii aan halkan u imid ayaa ah in kooxdani ay dalkan ka tahay koox wayn, waa mid ka mid ah horyaalada fiican Yurub, isla markaana waxaan fursad u haystaa in aan muujiyo in anigu aan u qalmo”.